६ चैत्र २०७७, शुक्रबार २१:५२ प्रकाशित
मानिसको शत्रु रोग समान अरु को हुन सक्छ र? रोगले सानू ठुलो बुढो तन्नेरी , गरिब कहाँ भन्छन् र? भर्खरै २१ बर्षको कलिलो उमेरमा नै पाठेघरमा संक्रमण भएर पित्तथैली र मृगौला मा समेत असर पार्दै गएको हुनाले बिगत १ वर्षदेखि बिरामी सन्दु वाइबालाई हाल Teaching Hospital मा उपचार गराइरहेको छ।
अहिले औषधि किन्ने पनि पैसा नभएकाले सन्दु वाइवा लाई बचाऊनकोलागी हजुरहरुको सहयोग को ठुलो खाँचो छ। विगत दुई साता देखी पाठेघर संक्रमण भई पित्तथैली र मृगौलामा समेत संक्रमण फैलिएर टिचिङ्ग अस्पतालमा भर्ना भई उपचरथ मकवानपुर जिल्ला,
इन्द्रसारोबार गाउँपालिका वडा नं. ५ निवासी सुरेंद्र वाईबाकी २१ वर्षीय पत्नि सन्दु वाईबा को आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार २१:५२ मा प्रकाशित